Global Voices teny Malagasy » Natsangan’i Japana ho velona indray i ‘Amabie’, zava-boary fahiny, hiady amin’ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Marsa 2020 3:37 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Tantara, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
“Zava-baovao miroborobo fatratra ao Japana ny ‘amabie’. Fa inona marina moa izy io? Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanazavana  ao amin'ny fantsona YouTube ‘Omega Sisters’ .
Raha mbola mitaintaina fatratra amin'ny COVID-19  i Japana, dia nitampody avy any amin'ny fotoam-panompoana fahiny tao Japana indray ny zava-boary miavaka hiady amin'ny viriosy, fa tao amin'ny media sosialy kosa no nivoahany tamin'ity indray mitoraka ity .
Talohan'ny tapaky ny volana marsa 2020, nalaza tao amin'ny Twitter ny farangonteny #Amabie (＃アマビエ ) raha nifampizara soritsoritra sary sy karazan-javaboary avy amin'ny tontolo hafa nantsoina hoe ‘yokai ‘ (妖怪) nivoaka nandritra ny vanim-potoana Edo tao Japana, roanjato taona lasa izay, ny olona ao avy amin'ny vazantany efatra tao Japana.
Fanoritsoritana ny ‘amabie’ iray tamin'ny vanim-potoana Edo. Sary azon'ny rehetra ampiasaina, tao amin'ny Wikipedia .
Tamin'ny fanoratana tao amin'ny FU , gazetiboky iray mivoaka isam-bolana ao amin'ny prefektioran'i Fukui, i Nagano Eishu, mpanao fikarohana sady folklorista, manazava ny fanintonana ara-tarazo ny ‘amabie':
Mbola manohy amin'ny famoahana sary ‘amabie’ ny olona ao amin'ny Twitter. Azonao jerena ireo famoronana hafa amin'ny alalan'ny fanarahana ny farangon-teny #アマビエ  (‘amabie).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/03/19/147366/
 ‘Omega Sisters’ : https://www.youtube.com/channel/UCNjTjd2-PMC8Oo_-dCEss7A
 fiantraika manerantany ny COVID-19: https://globalvoices.org/specialcoverage/covid-19-global-coverage-for-a-pandemic/
 mitaintaina fatratra amin'ny COVID-19: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/07/national/japans-covid-19-infections-much-higher-reported-niid/#.Xm0ae47YpEY
 fa tao amin'ny media sosialy kosa no nivoahany tamin'ity indray mitoraka ity: https://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2020031201079
 tao amin'ny Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2233820
 Tamin'ny fanoratana tao amin'ny FU: https://fupo.jp/article/amabie/